Di Maria Muxuu Ka Yiri Inay Niyad Jabisay Guul Daradii CL Ee Real & Inay Sanad Xiga Isa Soo Adkayn Karaan %
Kadib markii goo hore Paris Saint-Germain, laga reebay tartanka Champions League, ayaa Angel Di Maria, wuxuu sheegay in guul daradaan ay sababi doonto in kooxda lagu sameeyo isbedalo kala duwan oo waa weyn, sanad ciyaareedka soo socdo.
PSG, ayaa waxay suuqa ku bixisay aduun dhan lacageed waali ah, si ay usameyso koox halis ah, iyagoona rajo ka qabay inay ugu yaraan Final-ka, ay gaaraan xagaagan marka laga hadlo Champions League, laakiin ma aysan dhicin.
“Waxay ahayd dharbaaxo wayn, waxaan qarashgaraynay 400 Milyan oo Yuuroo, si aan ukeeno ciyaaryahano cusub – Kooxda waa ay dhibtooneysaa maxaa yeelay kasoo haritaanka Champions League, sida iska cad taageerayaashu waa ay niyad jabsan yihiin,” ayuu yiri.
Sidoo kale, wuxuu sheegay laacibkaan wadanka Argentina udhashay in kooxdiisa ay kusoo laaban doonto sanad ciyaareedka dambe garoomada waa weyn iyadoo xoogan, islamarkaana diyaaradda saari doonto ku guuleysiga saddex kooob.
“Waan ognahay sida aan sare ugu qaadi karno madaxeena, hadana waxaan dooneynaa inaan saddexley qaadno – Saddankii hore ma anaan sameyn laakiin, waxaan rabnaa inaan isbedalo sameyno sanad dambe,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Di Maria.
Sikastaba, PSG ayaa waxay hadda kaliya ay diirada saaraysaa horyaalka wadanka Faransiiska oo ay dhibco badan ku hogaamineyso iyo waliba koobabka kale maxaliga ah, iyadoona ugu yaraan udagaalameysa hadda Labo koob.
Champions LeagueCLDi MariaPSG vs Real Madrid